ईच्छा अनुसार नै यौन सम्पर्क गरे पनि किन उदास हुन्छन् महिला? | Glamour Nepal
यौन सम्पर्कले शारीरिकका साथै मानसिक खुशी प्राप्त हुन्छ। जसले आनन्ददायक अनुभूति पनि प्राप्त हुन्छ। यौन सम्पर्कले सम्बन्ध बलियो हुनका साथै हाम्रो स्वास्थ्यका लागि पनि लाभदायक हुन्छ। तर के तपाईलाई थाहा छ सहमतिमा यौन सम्पर्क गर्नुका बाबजुदपनि महिलाहरुमा उदासिनताको भावना आउँछ। यो कुरा हालै गरिएको एक अनुसन्धानले दावी गरेको हो।
यौन सम्पर्कपछि महिलामा उदासी क्वीन्सलैण्ड यूनीभर्सिटी अफ टेक्नोलोजीद्वारा गरिएको एक अनुसन्धानका अनुसार यौन सम्पर्कको बेला चरमसख, अत्यधिक आनन्दको अनुभूतिका साथै उदासी पनि एक प्रकारको भावनात्मक अभिव्यक्ति हो। अनुसन्धानकर्ताले सहमतिले यौन सम्पर्कका बाबजुद धेरैजसो महिलामा उदासीको भावना आउने गरेको र यो एक प्रकारले मनोवैज्ञानिक समस्या हो।
के भन्छ अनुसन्धानले ?
२ सय ३० महिलामा गरिएको अनुसन्धानबाट पत्ता लागेको छ कि महिलाहरु यौन सम्पर्कपछि तनाव र उदासी महसुस गर्छन्। रिपोर्टका अनुसार ५ प्रतिशत महिलाहरुले यस्तो लक्षणको बारेमा बितेको चार हप्तामा महसुश गरे। जबकी ४६ प्रतिशत महिलाहरुले यसलाई जीवनमा कमसेकम एक पटक महसुश गरे।
अनुसन्धानकर्ताले यस सम्बन्धमा अझ बढि जानकारी दिदैँ एक महिलाले हामिलाई लेखेको पत्रमा भनिएको छ की उनको विहेको २० वर्ष वितिसक्यो र उनी यौन सम्पर्कपछि वाथरुममा गएर रुने गर्छिन्। रिपोर्टका अनुसार यो प्रायःजसो महिलाहरुका साथ यस्तो हुने गर्छ, कसैसँग धेरै भने कसैसँग थोरै। यस अवस्थामा यौन सम्पर्कपछि आफ्नो यौन साथीको राम्रो ध्यान दिनुपर्छ। यौन सम्पर्क भन्दा पहिले फोरप्ले जति आवश्यक छ त्यति नै यौन सम्पर्कपछि आफ्नो यौनसाथीसँग समय बिताउनु पनि आवश्यक छ।
Happy Life Happy Relationship Relation
साइकल: दार्जिलिङका मजदुरकाे कथा (भिडियो)
अभिनेत्री रेखा थापा र निर्माता छबिराज बीच डिभोर्स
अभिनेत्री रेखा थापा र निर्माता छबिराज बीच डिभोर्स – भिडियो हेर्नुहोस् अभिनेत्री रेखा थापा र निर्माता छबिराज ओझा अलग्गीएका करिब चार बर्ष भईसकेको छ। डिभोर्स भयो भन्दै...